Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Macluumaad cusub oo ku saabsan sida Is-dhaafsiga u dhexeeya Unugyada Pancreatic ay u keeni karaan Nooca Sonkorowga ee dhifka ah
Enzymes dheef-shiid kiimikaad ah ayaa isku-darka unugyada beta ee soo saara insulin-ta ee u dhow, taasoo kicisa xaalad la iska dhaxlo oo laga yaabo inay iftiimiso cudurrada kale ee xameetida.
Xameetida, unugyada beta ee soo saara insuliin-ku waxay ku urursan yihiin unugyo kale oo hormoonno soo saara hormoonnada waxaana ku hareeraysan unugyo exocrine pankreati ah oo soo saara enzymes dheefshiidka. Cilmi-baarayaasha Xarunta Joslin Sonkorowga ayaa hadda muujiyay sida hal nooc oo ka mid ah cudurrada la iska dhaxlo ee naadirka ah ee loo yaqaanno sokorowga bilawga ah ee da'yarta (MODY) ay wataan enzymes dheefshiidka oo is-beddelay oo laga soo saaro unugyada pancreatic exocrine ka dibna ay qaadaan unugyada beta ee qarinaya insulin-dariska.
Helitaankan ayaa laga yaabaa inay caawiso fahamka cudurrada kale ee xameetida, oo ay ku jiraan nooca 1 ama nooca 2 ee sonkorowga, kaas oo isdhaafsiga unugyada aan caadiga ahayn ee u dhexeeya labadan kooxood ee unugyada laga yaabo inay ciyaaraan door dhaawac leh, ayuu yiri baaraha sare ee Joslin Rohit N. Kulkarni, MD, PhD, Madaxa Qaybta ee Joslin's Islet iyo Qaybta Biology-ga Dib-u-cusboonaysiinta iyo Bare-sare ee Caafimaadka Dugsiga Caafimaadka Harvard.
Inta badan noocyada MODY waxaa sababa hal bedel oo ku yimaada hiddo-wadaha muujinaya borotiinnada unugyada beta. Laakin hal nooc oo MODY ah oo loo yaqaan MODY8, hiddo-wade is-beddelay oo ku jira unugyada exocrine ee u dhow ayaa loo yaqaanaa inuu bilaabo habkan waxyeellada leh, ayuu yidhi Kulkarni, oo u dhiganta qoraaga warqadda dheef-shiid kiimikaadka dabeecadda oo soo bandhigaya shaqada. Saynis yahano shaybaadhkiisa ku jira waxa ay ogaadeen in MODY8, enzymes dheefshiidka ee uu dhaliyo wadarta hidda-wadaha is-beddelay ee unugyada beta oo wax u dhimaya caafimaadkooda iyo shaqadooda soo daynta insulin-ta.
"In kasta oo qanjidhada 'endocrine' iyo 'exocrine ganaca' ay sameeyaan laba qaybood oo kala duwan oo leh hawlo kala duwan, xiriirkooda dhow ee anatomical ayaa qaabeeya aayahooda," ayuu yiri Sevim Kahraman, PhD, cilmi-baare postdoctoral ee shaybaarka Kulkarni iyo qoraaga hormuudka ah ee warqadda. "Xaaladda pathological ee ka soo baxda qayb ayaa wax u dhimaysa qaybta kale."
"Inkasta oo MODY8 uu yahay cudur aad dhif u ah, waxaa laga yaabaa inay iftiimiso hababka guud ee ku lug leh horumarinta cudurka macaanka," ayuu yiri Anders Molven, PhD, qoraa wax ku biirinaya iyo borofisar ka tirsan Jaamacadda Bergen ee Norway. "Natiijooyinkayadu waxay muujinayaan sida habka cudur ee ka bilaabma xameetida exocrine uu ugu dambeyntii u saameyn karo unugyada beta-soo-saarka insulin. Waxaan u maleyneynaa in sida xun ee exocrine-endocrine crosstalk ay si gaar ah ula xiriiri karto fahamka xaaladaha qaarkood ee nooca 1-aad ee sonkorowga."
Kulkarni wuxuu sharraxay in hidda-wadaha CEL ee la beddelay (carboxyl ester lipase) ee MODY8 sidoo kale loo tixgeliyo hidde-sidayaasha khatarta ah nooca 1-aad ee sonkorowga. Taasi waxay dhalinaysaa su'aasha ah in xaaladaha qaarkood ee nooca 1-aad ee sonkorowga ay sidoo kale ka muuqdaan borotiinnada isku-dhafka ah ee unugyada beta, ayuu yidhi.
Daraasadu waxay ku bilaabatay iyada oo wax ka beddeleysa xariiqda unugga unugga exocrine (acinar) si ay u muujiso borotiinka CEL ee mutant. Marka unugyada beta lagu maydho xal unugyo is-bedelay ama unugyada exocrine caadiga ah, unugyadii beta waxay qaateen barootiinada is-beddelay iyo kuwa caadiga ahba, iyagoo keenaya tiro badan oo borotiinada is-beddelay. Barootiinada caadiga ah waxaa hoos u dhigay hababka caadiga ah ee unugyada beta oo la waayay dhowr saacadood, laakiin borotiinada mutant-ku ma dhicin, taas beddelkeeda waxay sameeyeen isku-darka borotiinka.
Haddaba sidee bay isu-geyntan u saameeyeen shaqada iyo caafimaadka unugyada beta? Tijaabooyin isdaba joog ah, Kahraman iyo asxaabteeda waxay caddeeyeen in unugyadu aysan soo deynin insulinta sidoo kale baahida, si tartiib tartiib ah ayey u bateen waxayna aad ugu nugul yihiin dhimashada.
Waxay xaqiijisay natiijooyinkan laga helay xariiqyada unugyada iyadoo la tijaabiyay unugyo ka yimid deeq-bixiyeyaasha aadanaha. Marka xigta, waxay ku bedeshay unugyada exocrine ee bini'aadamka (mar kale waxay muujinaysaa mid isbedelay ama enzyme dheefshiidka caadiga ah) oo ay weheliso unugyada beta ee bini'aadamka qaabka jiirka ee loogu talagalay in lagu aqbalo unugyada aadanaha. "Xitaa xaaladdaas, waxay tusi kartaa in borotiinka is-beddelay uu mar kale wax badan ka qaato unugga beta marka la barbardhigo borotiinka caadiga ah, wuxuuna sameeyaa isku-dar aan la milmin," ayuu yidhi Kulkarni.
Intaa waxaa dheer, baarista beeryarada dadka qaba MODY8 ee u dhintay sababo kale, baarayaashu waxay arkeen in unugyada beta ay ka kooban yihiin borotiinka is-beddelay. "Deeq-bixiyeyaasha caafimaadka qaba, ma aanan helin xitaa borotiinka caadiga ah ee unugga beta," ayuu yidhi.
"Sheekadan MODY8 waxay asal ahaan ku bilaabatay indho-indheynta bukaan-socodka ee bukaannada qaba sonkorowga sidoo kale waxay qabaan dhibaatooyin dheef-shiid kiimikaad, taas oo keentay in la helo hoos-u-dhige hidde-side caadi ah," ayuu yiri Helge Raeder, MD, oo ah qoraaga iyo borofisar ka tirsan Jaamacadda Bergen. "Daraasadda hadda jirta, waxaan xireynaa wareegga annagoo si farsamo ahaan isku xira natiijooyinkaan caafimaad. Si ka soo horjeeda filashadayada, enzyme dheefshiidka sida caadiga ah loogu talagalay mindhicirka ayaa la marin habaabiyay si uu u galo jasiiradda ganaca ee gobolka buka, ugu dambeyntiina wax u dhimaya dheecaanka insulin.
Maanta, dadka qaba MODY8 waxaa lagu daaweeyaa insuliin ama dawooyinka sonkorowga afka. Kulkarni iyo asxaabtiisa waxay raadin doonaan habab ay ku naqshadeeyaan daawaynta shaqsiyeysan ee aad ugu haboon. "Tusaale ahaan, ma kala diri karnaa isku darka borotiinka, ama ma xaddidi karnaa isku darka unugga beta?" ayuu yiri. "Waxaan ka qaadan karnaa tilmaamo laga soo bartay cudurrada kale sida cudurka Alzheimers iyo cudurka Parkinson ee leh habka isku-darka unugyada."
Cudurka Alzheimer Information Medicine Nature
Tignoolajiyada cusub ee waxyeelada xubnaha iyo unugyada ee...
Daah-fur Cusub oo Caqabad ku ah Daawaynta Kansarka Pancreatic...